Yakanakisa Kutambanudza Tafura Inovhara neOvhura Kudzoka Kugadzira uye Fekitori | Jesson Mureza Arts & Crafts
Spandex Tafura Yekuvhara: Kuti Uve Mutete uye Naka
Yakapfeka neyedu yekutengesa tafura tafura, yako yekutanga yakajeka uye yakajairika tafura yaizotaridzika zvakasiyana zvachose uye yakatetepa ipapo ipapo. Iri jasi rinoshamisa rinosimbisa chimiro chetafura, makakora akanaka anowedzera pfungwa yekunaka kune yese seti. Haisi chete tafura zvakare asi chakanakisa chishandiso chekusimudzira, icho chinopa hunyanzvi uye yakachena yekuratidzira mharidzo. Vako vangangoita vatengi vanozokwezva neiyi yakasarudzika nzira yekuratidzira.
Yakasarudzwa Elastic polyester yeSarudzo
Iyo yakatambanudzwa ficha yemucheka ndicho chakavanzika cheiyo snug fit. Isu tinopa s marudzi emachira, 180g elastic polyester, murazvo unodzora elastic polyester uye murazvo unodzora 240g polyester, yesarudzo yako.
180g Kwakavharwa nenyama Polyester
Moto-unodzora 180g Elastic Polyester
Moto-unodzora 240g Elastic Polyester
Iti "Hongu" kuBudget Shamwari & Yakakwirira Hunhu
Kubva pane zvakasvibirira, senge machira, inki uye nzira dzekudhinda, kune zvigadzirwa zvakapedzwa, yega yega maitiro edu anoitiswa mukuteerera kune zvakasikwa zvine hushamwari zvinodiwa. Saka iwe unogona kuzorora uine chengetedzo yekushandisa iyi yakatambanudzwa tafura yekuvhara kwechiitiko kuratidza. Zvakare, isu hatitore mari yekuwedzera yekudhinda yakazara Ruvara uye izere logo kuiswa. Naizvozvo, iwe paunoratidzira netsika yakadhindwa spandex tafura yekuvhara neyakavhurika musana, unogona kunyatso kufumura meseji yako pabhajeti shoma.
Yakasarudzika Kwete Mumifananidzo chete Asi zvakare muSize
Pamusoro pekudhinda mifananidzo yemhando yako, isu tinogona zvakare kuita iyo inoenderana yekudhinda yekuratidzira tafura yemhando dzakakosha saizi. Pazasi pane saizi yakatarwa yeyakajairwa matafura ekuratidzira uye machira etafura. Kana iwe usingakwanise kuwana iyo yakakodzera kwazvo kubva kumasize mune ino fomu, ingotisiira isu mufananidzo uye neyedu ruzivo chigadzirwa nyanzvi nekukubatsira iwe kunze.
(180g yakasununguka Poly)
（240g yakasununguka Poly）
Mubvunzo: Mavara mangani aunogona kushandisa mukudhinda logo?
A: Tinoshandisa CMYK kudhinda, saka unogona kushandisa akawanda mavara sezvaunoda.
Mubvunzo: Unogona here kugadzira tafura yakafukidzwa kana yakafukidzwa tafura yekuvhara ini?
A: Ehe, iwo akaenzana tafura yekuvhara tafura ari 6 'uye 8' muchitoro chedu, asi saizi yetafura yekuvhara kana yakagadzirirwa tafura butiro inogona zvakare kugadziriswa zvinoenderana neyako tafura saizi kana template saizi. Kana iwe uchida saizi dzakagadziriswa, ndapota nyorera vamiririri vedu kuitira vatengi.
Mubvunzo: Mucheka murazvo unodzora here?
A: Hongu, tine tsika murazvo retardant micheka kuti kusarudzwa.
Mubvunzo: Ndinogona kusuka kana kuayina tafura yangu yekuvhara?
A: Ehe, iwe unogona kuchenesa nekutsvedza yako yemachira yetafura nekugeza-maoko nekuayina.
Mubvunzo: Micheka yacho ichapera here? Inotora nguva yakareba sei?
A: Kudzivirira kupera uye kuchengetedza kugadzikana kwemavara, isu tinoshandisa sublimation kudhinda kuti tione iyo inokurumidza ruvara.
Mubvunzo: Ungadzivise sei kutsva kana uchiparadzira tafura yekutambanudza?
A: Chikonzero chekutsvaira mucheka mutete. Tichashandisa mukobvu 180g uye 240g rejira kudzivisa dambudziko.
Tsika Inotambanudza Tafura Inovhara
Tambanudza Tafura Inovhara NeRogo